Dhacdo Waligeed aan kadhicin Magaalada Muqdisho oo la arkay iyo Ragii Sameeye Xabsiga ladhigay - iftineducation.com
iftineducation.com – Dhacdo Waligeed aan kadhicin Magaalada Muqdisho oo la arkay”Ragii Sameeye Xabsiga ladhigay”
Ayadoo Caalamka kadhacaan falal siweyn ula yabaan shacabka kudhaqan wadamadaasi ay kamid tahr wadanka somaliya kadhaca dhacdooyinka kuwa si aad ula yabaan somalida kudhaqan Goobaha ay kadhacaan iyo waliba kuwa maqal ahaan losoo gaarsiyo kana qaada fajac iyo ambakaak.
Arin labadii habeen ugu danbeyse kadhacday magaalada muqdisho ayaa noqotay hadal weyn ugu badan kuwaas oo si weyn u hadal hayaan shacabka halka qaarkood fajac kunoqotay waxayna dhacdadaan kadhacday degmada Xamarweyne ee Gobolka Banaadir.
Sida ay dhacdadaan goor dhow usoo gaarsiyeen dadka kudhaqan degmada Xamarweyne ayaa sheegay in oo geeriyooday Nin lagu magacaabi jiray Cali Ciid oo siweyn looga yaqaanay degmadaasi iyo qaar katirsan degmooyinka gobolka banaadir ayaa lasheegay in oo Tumi jiray Mingiska iyo Faq buraalaha waxaana lasheegay in oo geeriyooday.
Ninka ay lagu aasey goobtii o wax kutumi jiray waxaana lagu arkay qabrigiisa nalal kashidmaayo xiliyada habeenkii oo mar waliba nuuc isku badalaayo waxaan ay noqotay in shacabka layabaan.
Blse ragii kudhaqnaa xaruntii lagu aasey Meydka Cali aya shacabka ushegeen in oo ninkaan ayaa Ooliyo sidaa ogeydna nalala oga shidmayaan waxaan lasheegay in dad aad u farabadan isaga kale imaadeyn gobolka banaadir si oga duceystaan.
Dadkii kusugnaa halka oo ku aasnaa aya lasheegay in ninkaan kaduceysraan si u helan wax waliba ay doonayaan waxaan alaga qaatay habeenadii ugu danebyse lacago farabadan wallow dadka usoo galeen safaf dhaadheere si ubarakeystaan waxaana lasheegay in qaarkood lsin jiray Biyo caadi loogu sheegay xiliga oo noolaa quraan ku aqriye tahliilna ay tahe.
Arinta ceebta katimid ayaa ah goortii mid akmid a haweenkii usoo cibaado doonbatay kdul dhacday meydka ayadoo damacsaneyd in ay akfarisarto blse waxa soo baxay Nalal waa weyn oo kujira carada kuwaas oo lasheegay kalaro kale duwan kufareejeynayaan ayadoo ka baxdo fiilo dheer oo gasho meel laga shido.
Dadkii caawa feelalka dhaa dheer ugu sugaaye meydka Cali Ayaa afka gacanta saaray ayadoo hal haleel oga baxay goobta wallow qaarkood alsheegay in durbadii meesha kasameyeen dagaal iyo qeylo kuna dhageen ragii Howshaan watay .
Ugu danbeyntii Ciidamada saldhiga Xamarweyne aya soo gaaray kuwaas oo xabsiga utaxabay ragii ka ganacsanaaye arintaani ayagoo shegay in lagu qaadi doono dacwadooda waxaana dadkii lagu war geliye in maalinimada hore biri imadaan saldhiga si lacagahooda looga qaado ragaan khaliifay kuna sheegay Meydka OOWLIYO loona baahanyahe in laga duceysto.